Izeluleko ezingcono kakhulu Zokuhamba ngenkathi Ukhulelwe | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Izeluleko ezingcono kakhulu Zokuhamba ngenkathi Ukhulelwe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 29/05/2020)
Ukukhulelwa kungenye yezikhathi ezinhle kakhulu empilweni yakho. Kuyenzeka, Nokho, woza nemikhawulo ethile. Ikakhulu uma uhlela ukuhamba ngenkathi ukhulelwe. Ukuthwala nokwakha umntwana kukhawulela uhlobo lokuhamba ongalusebenzisa ukuzungeza, ikakhulukazi lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe emhlabeni jikelele. Umuntu akakwazi ukundiza nezinye izindlela eziningi zokuhamba ngenkathi ekhulelwe lapho engaphezu kwezinyanga ezithile, noma uma ubhekene nezinkinga. Qiniseka ukuthi ukufaka konke lokhu ezinhlelweni zakho zokuhamba ukhulelwe. Indlela elula kakhulu yokufika lapho uya khona lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe nge isitimela. Izinkampani zezitimela zivame ukubhekelela abesifazane abakhulelwe, ukuyenza ibe enye yezindlela ezaziwa kakhulu zokuhamba lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe.
Izincwajana zemininingwane Ezokuthutha Is The nokunobungane Way Izikhangibavakashi, Ikakhulu Lapho Tukugcwala ngenkathi ukhulelwe. Lesi sihloko kulotshiwe sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Gcina Isitimela, Iwebhusayithi Amathikithi Eshibhe kakhulu Emhlabeni.
Ngaphambi kokuthi Uqale
Ngaphambi kokuthi uqale ngisho nohambo lwakho ngomncane wakho phakathi, zinike isikhathi ukulungiselela umzimba wakho ukuhamba ngenkathi ukhulelwe. Zama ukwenza izivivinyo eziningi ngangokunokwenzeka, lokhu kuzokwenza qiniseka ukuthi umzimba wakho usesimweni esihle kakhulu ukwenza isihlabathi kuze kube semngceleni wokuhamba. Ukuhamba ngenkathi ukhulelwe kungathatha okuningi kuwe. Prakthisha ukwelula, kanye nokuqinisa umgogodla nemilenze yakho. Ukulala ezindaweni zokuhamba imvama kakhulu kunendlela obekuvame ngayo, futhi ungadinga ukuguquguquka okwengeziwe ukuze ukhululeke lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe.
I-Amsterdam iya eLondon
EParis kuya eLondon
IBerlin iya eLondon
Ukuhamba Ngenkathi Ukhulelwe Ithiphu 1: Bheka nodokotela wakho
Ngaphambi kokuthi uqale ukuhamba ngenkathi ukhulelwe, hlola idokhumenti yakho ukuthi empeleni uyihliselwe yona. Qiniseka ukuthi uchaza ukuthi uhamba ngenkathi ukhulelwe ngesitimela hhayi ngomoya, njengoba lokho kuzoba nomehluko omkhulu emphumeleni. Ukukhulelwa okuyingozi kakhulu nalabo asebephuze kakhulu esikhathini sabo sesithathu kungavunyelwa ukufinyelela ekuhambeni lapho bekhulelwe, ngakho-ke kungcono ngaso sonke isikhathi ukucaciswa kusengaphambili ukuze ugweme ukudumazeka. Uma usuvele konke kucace, ukubhuka kwakho ithikithi isitimela inthanethi.
I-Rotterdam iya eParis
Tukugcwala ngenkathi ukhulelwe Ithiphu 2: Hlela Ngokucophelela
Sonke siyazi ukuthi imicimbi efana nemishado namaqembu akuhlali kungenwa kusikhathi sakho esifanele, ikakhulukazi uma uhlela ukuhamba ngenkathi ukhulelwe. Lapho kungenzeka, Nokho, zama ukuqiniseka ukuthi ukuhamba kwakho kuyavumelana nengxenye ekhululekile kakhulu yokukhulelwa kwakho. I-trimester yokuqala imvamisa ehlushwa isicanucanu, ukuntuleka kwesifiso sokudla futhi ngokuvamile uzizwa kabi, okuyizindaba ezimbi zokuhamba ngenkathi ukhulelwe. I-trimester yesithathu yilapho uqala ukuzwa kancane njengomkhomo, futhi ukuma nganoma yisiphi isikhathi sesikhathi kwenza izinyawo zakho zifune ukuwa. Faka amaqaqa okuvuvukala, ukuntuleka kokulala, nemijikelezo yokuhamba kwengane ekhula njalo iye kulokho futhi ungaba nohambo olungathandeki kakhulu uma uhamba ngenkathi ukhulelwe. I-trimester yesibili imvamisa yisikhathi esingcono kakhulu sokuhamba kwakho. Umkhulu kakhulu okwamanje, futhi ezimweni eziningi, isicanucanu sikhaliphile. Ukuhamba ngenkathi ukhulelwe kuhlale kwenziwa kangcono uma ungasebenzisi isikhathi sonke ufuna ukuphonsa, noma alale phansi!
UMilan uya eRoma
UPisa uya eRoma
INaples iya eRoma
Ukuhamba Ngenkathi Ukhulelwe Ithiphu 3: Letha Izinsika Zakho
Ukukhululeka lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe akulula. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuyinto kamuva ekhulelwe. Qiniseka ukuthi upakisha imicamelo yakho oyithandayo yohambo lwakho. Ukuba nemicamelo yakho ngeke kuqinisekise kuphela induduzo ethe xaxa ngenkathi ukhulelwe, kodwa futhi kuzokunikeza umuzwa wokujwayela ukukusiza uzizwe ucindezelekile kakhulu. Ukuhamba ngenkathi ukhulelwe kungenza umhlane wakho, intamo, futhi muhle kakhulu zonke izingxenye zakho ezibuhlungu. Asibhekane nakho, into enhle kakhulu ingakhathaza ngenkathi ukhulelwe, ngakho-ke zama njalo yenza izinto zibe lula ngangokunokwenzeka lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe.
UMilan uya eVenice
Padua uye eVenice
I-Bologna iye eVenice
IRoma iye eVenice
Tukugcwala ngenkathi ukhulelwe Ithiphu 4: Gcina Gcina Isikhathi Sakho Isikhathi
Ukuhamba ngenkathi ukhulelwe kuvame ukuza nokubambezeleka okuningi okungalindelekile. Awusoze wazi ukuthi uzizwa kanjani ekuseni ngohambo lwakho, noma uma umzimba wakho uzodinga isikhathi ukuphuma lapho ukhulelwe ngenkathi ukhulelwe. Konke kucindezela kakhulu, futhi umuntu angajaha sekwephuze. Dweba itafula lesikhathi ngaphambi kohambo lwakho lesitimela, futhi uqiniseke ukuthi wengeza isikhathi esengeziwe esengeziwe kukho ngangokunokwenzeka. Ihlose ukusheshe ube khona ukubambezeleka njengethrafikhi noma yini enye ngeke ikwenze ukuthi uphuthume lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe. Impela, Ukuhlala ulinde isitimela sakho kungaba buhlungu, kepha ingcono kakhulu kunokujaha, ngenkathi ngikhulelwe, ukuyibamba.
Munich ukuya eVienna
I-Graz eya eVienna
Prague ukuya eVienna
Ukuhamba Ngenkathi Ukhulelwe Ithiphu 5: Ungathembeli Ekuthengeni Ukudla
Zonke izinhlobo zezinto zingakususa esiswini sakho uma ukhulelwe. Ukungasho ukuthi kunohlu uma nje ingalo yakho yezinto okungafanele udle. Ukuletha ukudla kwakho kanye nawe njengengxenye yohlelo lwakho lokuhamba kuzokhipha iningi lalezo zinkinga lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe. Lapho upakisha okwakho ukudla, uyakwazi ngqo okukulo, nokuthi yini okufanele uyilindele. Qiniseka ukuzipakisha ebhokisini elipholile noma kokunye ukufakwa okuvikelwe ukuligcina lipholile noma lifudumele lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe.
INuremberg iye ePrague
IBerlin iya ePrague
IVienna kuya ePrague
Tukugcwala ngenkathi ukhulelwe Ithiphu 6: Kathathu Hlola Imithi Yakho
Lowo muzwa wokucwila lapho ubona ukuthi ushiye umuthi obalulekile ngemuva yinto engekho kithi ofisa ukuyizwa, ikakhulukazi lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe. Lapho ulindele, ungahle ube semithini ehlukile empilweni yansuku zonke. Lokhu kungenzeka kungangeni masinyane ngaphambili kwengqondo yakho lapho upakisha uhambo lapho ukhulelwe. Qiniseka ukuthi ungabheki kathathu kuphela ukuthi unemithi engaphezu kweyanele yokuhamba ngenkathi ukhulelwe kodwa uthole omunye umuntu ukuthi akuhlole futhi.
UFrankfurt uye eBerlin
ILeipzig iye eBerlin
IHamburg iya eBerlin
Ukuhamba ngenkathi Ukhulelwe Ithiphu 7: Ungaphakamisi umthwalo wakho!
Lokhu kuvame ukunganakwa lapho ucabanga ukuhamba lapho ukhulelwe. Imvamisa kunjalo siphatha ipotimende noma isikhwama ukuze nje senziwe futhi siphume endleleni. Impahla isindayo, ngakho-ke ukuyiphakamisa ngenkathi ukhulelwe kungu-cha! Thola omunye umuntu ozokupha isandla uma ukwazi, ngaphandle kwalokho hlabalela umqaphi ukukusiza lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe.
Tukugcwala ngenkathi ukhulelwe Ithiphu 8: Ungahambi Wedwa
Noma uhlela ukuthatha uhambo ngokwakho, zama ukuyibopha nomuntu osebenza naye noma umngani odinga ukuya endaweni efanayo. Ukuhamba ngenkathi ukhulelwe kuphela kukubeka engcupheni enkulu. Awusoze wazi ukuthi kukhona okungahambanga kahle, ngakho-ke udinga ubuso obunobungane lapho nawe ukukusiza. Lapho unquma ngezinhlelo zakho zokuhamba, zama ukufaka okungenani omunye umuntu omethembayo ukuhamba nawe.
Ukuhamba ngenkathi Ukhulelwe Ithiphu 9: Letha Umculo Othile
Lonke iphuzu ngemuva kokulungiswa lapho usohambweni ngenkathi ukhulelwe ukunciphisa ukucindezela. Ukuxineka kungadala zonke izinhlobo zemiphumela engemihle kanye nemiphumela engemihle emzimbeni wakho. Qiniseka ukuletha umculo nawe esitimeleni sakho. Pop ezinhlokweni zakho, futhi uhlale nje uphumule lapho ufika lapho uya khona. Khumbula ukuphefumula.
Ithiphu 10: Bhuka Amathikithi Akho Esimweni Sokuqala
Qiniseka ukuthi awagcini ngokubhuka amathikithi akho ku-inthanethi ukuze uhambe ngenkathi ukhulelwe, kepha uthola namathikithi eshibhile eshibhile nge-Gcina A Sitimela. Ukuqinisekisa ukuthi unokuthula kwengqondo maqondana nokuthola amathikithi amahle kakhulu, kwenze kusengaphambili ngangokunokwenzeka, thola amathikithi afanele wesitimela kubalulekile ukuze ube nesipiliyoni esihle lapho uhamba ngenkathi ukhulelwe.
Ukukhulelwa kuyinto enhle futhi kwesinye isikhathi eyethusayo. Ngezinye Londoloza Isitimela singathanda ukukusiza ukuba ujabulele uhambo lwakho, ukuhlela kusengaphambili, futhi uvikele noma yiziphi izingibe ezingaba khona. Tukugcwala lapho ukhulelwe ngesitimela kungokuhlangenwe nakho okuhle, futhi lokho akufanele kuguquke ngoba ulindele umntwana!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “10 Amathiphu Wokuhamba Ngenkathi Ukhulelwe” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/tips-traveling-pregnant/?lang=zu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha u-de ube ngu-fr noma u-tr nezilimi eziningi ozikhethayo.
europetravel	ukhulelwe	Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi	uhambaghile	I-TravelPregnty	traveltips
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
4 Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Oku-Trip Essentials EYurophu